Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bangladesh » Ny foibem-pizahantany Cox's Bazar dia nandidy ny hanidiana azy ireo tao anatin'ny fihenan'ny COVID
Toeran'ny fizahantany Cox's Bazar
Ny fitantanan-draharahan'ny distrikan'i Cox Bazar dia nandidy ny hanidiana ny toeram-pizahantany rehetra ao amin'ny tanàna amoron-dranomasina manoloana ny onjan'ny aretina coronavirus vaovao manerana an'i Bangladesh.
Tamin'ny volana febroary dia nirohotra nankany amoron-tsirak'i Cox's Bazar ireo mpizaha tany, voasarika tamin'ny isa COVID-19 ambany.
Hatramin'io fotoana io dia nisy fitomboan'ny trangana virus coronavirus manerana ny tanànan'i Bangladesh.
Nisy toromarika vaovao nandidy ny toerana fizahan-tany rehetra an'ny mpizahatany, anisan'izany ny morontsiraka, hikatona hatramin'ny 14 Aprily
Ny tobin'ny mpizahatany an'i Cox's Bazar dia miorina ao amin'ity tanàna ity any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Bangladesh ary fantatra amin'ny maha ivom-pizahan-tany azy ary manana morontsiraka lava fasika manomboka eo amin'ny Sea Beach any avaratra ka hatrany amin'ny Kolatoli Beach any atsimo.
Ny komisera lefitra Md Mamunur Rashid no nampahafantatra ny hetsika hanakatonana ny toerana fizahan-tany rehetra ao Cox's Bazar tamin'ny fanambarana natao tokony ho tamin'ny 8 ora alina omaly alakamisy 45 aprily 1. Nilaza ny lefitra misahana ny fizahan-tany fa nandefa toromarika tany amin'ny Distrikan'ny distrika ny minisiteran'ny fizahan-tany omaly hariva taorian'ny nipoiran'ny areti-mifindra coronavirus tao amin'ny firenena.
Ny toeram-pizahantany Cox's Bazar dia nakatona tamin'ny tapaky ny volana martsa lasa teo taorian'ny nahitana ireo tranga voalohany. Nandidy ny masoivoho rehetra, anisan'izany ny Tourist Police, ny governemanta mba handray andraikitra araka ny toromarika.
Ny toromarika dia nandidy ny fanidiana ny toerana fizahan-tany rehetra ao Cox's Bazar hatramin'ny 14 aprily. Tamin'ny voalohany dia tokony hakatona ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny, saingy nanamafy i Mamunur taty aoriana fa afaka mitazona ny vahiny amin'ny antsasaky ny fahaizany izy ireo.
Tsy mahazo avela eny amoron-dranomasina ny mpizahatany satria manakatona azy io sy ny orinasa mifandraika amin'ny fizahan-tany, toa ny fanofana jet ski, hoy i Mohammad Mohiuddin Ahmed, mpitantana ny polisy fanampiny.
Vao tamin'ny volana febroary lasa teo dia nandray mpizahatany manodidina ny iray tapitrisa i Cox's Bazar tamin'ny faran'ny herinandro fahatelo tamin'ity volana ity ary trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny 400 efa vita famandrihana ary lafo avokoa ny tapakilan-drivotra sy bus rehetra. Na ny tapakila rehetra an'ny sambo Saint Martin's Island dia voafidy ihany koa.
Ho fanampin'ireo toeram-pizahantany malaza toa an'i Laboni, Inani, Himchhori sy ny hafa, faritra maro any amin'ny distrika amoron-tsiraka toa ny Saint Martin's Island, Dulahazra Safari Park, Radiant Fish World ary ny maro hafa dia nandrasan'ny mpizahatany marobe miaraka amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana be sy fiakaran'ny vidin'ny zavatra ilaina.
Ity firongatry ny asan'ny mpizahatany ao amin'ny Bangladesy tanàna dia noho ny zava-misy tamin'izany fotoana izany dia nanatri-maso ny fahalavoan'ny isan'ny tranga COVID-19 isan'andro sy ny maty.